Cunto: Ma Botnet?
Bootaalayaasha ayaa hadda loo tixgeliyaa inay yihiin kuwa ugu caansan ee loo isticmaalo internetka ee macaamiisha suuq geynta. Botnets waxay qaadaan macaamiisha isticmaala kombuyuutarka iyo helitaanka aqoonsiyada iyadoon la haysan oggolaansho iyo aqoon. Jason Adler, oo ah Maamulaha Guud ee Macaamilka Sare Maamulaha Guud ee Macaamiisha, wuxuu sharxayaa in hubkan internetka uu saameyn ku yeelan karo kombiyuutarada, daabacayaasha ama duubayaasha.
Waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato botnets
Botnets waa shabakad ah qalabyada lagu amray in ay nacasnimo si ay ugu dhuuntaan bogagga iyo qalabka si aamusan. Botnet waxaa lagu amraa baasaaboor-yahanka, cybercriminals oo xakameynaya xarkaha iyada oo aan khasab ahayn in lagu xidho kombuyuutarka - configurar webmail locaweb smartphone. Boodhadheydu waxay ku shaqeeyaan gargaar looyaqaano amar ah oo awood u leh in ay fuliyaan weerarrada ururada.
Caadi ahaan, waxaa loo isticmaalaa inay xadaan oo ay galaan macluumaadka dhaqaale iyo furaha. Adeegga diidmada ee loo qeybiyey waa isticmaalka kale ee botnets, halkaas oo qoryaha loo xakameeyo gaadiidka baaskiilada ama soo diraan codsiyada bogus bogga gaarka ah. Waqtiga fog, goobta la beegsaday waxay ku dhamaaneysaa in la buuxiyo, oo ah dhacdo oo ku khasbaysa in ay xirto. Dhawaan, shabakadaha robots ayaa si ballaaran loo isticmaalay si ay u xadaan lacagaha ololayaasha samafalka.
Kor u kaca shabakadaha robot
Koboca iyo ballaarinta internetka ayaa waxay door muhiim ah ka ciyaaraan kororka botnets. Qalabka Internet-ka (IoT) qalabka si sahlan ayaa loo xakameyn karaa oo loo weerari karaa botnets marka la barbardhigo kombiyuutarada. Shodan, oo ah mishiin loogu talagalay aaladaha IoT, ayaa inta badan loo adeegsadaa boodhadh-ilaaliyeyaasha si ay u aqoonsadaan una ogaadaan aaladaha jilicsan iyo qalabyada internetka.
Isticmaalayaasha abuuraya botnet ma aha oo kaliya isticmaalka shabakadaha casriga ee faa'iidadooda dhaqaale laakiin sidoo kale ijaar u siiyaan kuwa kale ee xaasidnimada leh. Weeraradu waxay ka faa'iideystaan ​​botnets si ay u xadaan oo u helaan macluumaad muhiim ah oo ku saabsan bogagga internetka. Boostada Bredolab waxay tusaale u tahay shabakad robot ah oo lagu kireeyo kombuyuutarrada. Hase yeeshee, weeraryahannadu waxa ay ku dhamaatay inay bixiyaan kharashka qiyaasaha $ 120,000 bil kasta.
Mirai wuxuu ahaa weerar kale oo lagu diidey adeegga diidmada ee fayruska ku dhacay. Horumarinta u samaysay botnet waxay siisay hubka internetka ee celceliska mushaharka $ 7,500 saacaddii.
Talooyin ku saabsan sidii aad uga ilaalin lahayd kombuyutarkaaga boorsooyinka
Boorashka ayaa loo tixgeliyaa in ay khatar yihiin maadaama ay weerarradu ay saameyn ku yeelanayaan iyada oo aan la siin ogaysiiska kumbuyuutarrada. Ka dib markii la qaado kumbuyuutarkaaga, kombiyuutarkaagu wuxuu muujinayaa kor u kaca taraafikada iyo waxqabadka gaabinta. Halkan waxaa ku yaal khiyaamo ku saabsan sida loo ilaaliyo qalabkaaga inaad ka qaaddo shabakadda shabakadda.
Jooji sifooyinka aan loo baahnayn ee ku saabsan kumbuyuutarkaaga. Hackers ayaa ka faa'iideysanaya qalabka iyagoo adeegsanaya sifooyinka furan iyo dekadaha.
Si joogto ah u cusbooneysiin hardware iyo software ayaa ku jira qalabkaaga. Haysashada barnaamijyadaada iyo barnaamijyada dib loo cusbooneysiiyay waxay caawiyaan ogaanshaha iyo xayiraan faylalka xaasidnimada iyo qalabka loo yaqaan "computer access"
Isticmaal lambar sir ah oo aad bedesho goobahaaga kombiyuutarka si aad uga fogaato in la xakameeyo. Xakamaynta iyo kuwa weerarka geysta waxay baaraan sirta daciifka ah iyo goobaha warshadaha si loo helo qalabkaaga
Qaybta suuq-geynta, bakhaarada waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin kuwa ugu caansan internetka. Ha u ogolaan botnets khatarta ah ololehaaga internetka. Fadhi ku sii hayso adoo fulinaya talooyinka kor ku xusan.